दुनियाका यी विचित्र तथ्यहरु तपाईहरुलाई थाहानै छैन ! थाहा पाउनु भएमा अचम्मित हुनुहुनेछ – TAJA KHAWAR
दुनियाका यी विचित्र तथ्यहरु तपाईहरुलाई थाहानै छैन ! थाहा पाउनु भएमा अचम्मित हुनुहुनेछ
August 5, 2018 Taja Khawar रोचक 0
एजेन्सी : संसारलाई विचित्र तथ्यको भण्डार मान्ने गरिन्छ। सबै तथ्यहरु सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। आज हामी यस लेखमा केहि अचम्म लाग्ने तथ्यहरु बताउने छौँ। यी तथ्यहरु तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यी तथ्यहरु सुन्दा सामान्य लागेता पनि थाहा पाउनु भएमा भने महत्वपूर्ण काम लाग्न सक्छ।
मानव शरीरमा हुने एंजाइम हाम्रो शरीरमा खान पचाउने काम गर्ने गर्छ। तर यहि एंजाइमले मृत्यु भएको लगभग केहि दिन पछि भने मानव शरीरलाईनै खान शुरु गर्न थाल्छ। एक मानव शरीरमा ०.२ ग्राम सुन रहेको हुन्छ। तर सुन मानव रगतमा बग्ने गर्छ। एक मानव शरीरले एक सेकेन्डमा १५ मिलियन रातो रक्त रक्त कोशिका निर्माण र हत्या एकै पटकमा गर्ने गर्छ।
आधिकारिक तथ्यक अनुसार विश्वको सबै भन्दा लामो युद्ध नेदरल्याण्ड र सिलेस बीच भएको थियो। यस युद्ध सन् १६५१ देखि १९८६ सम्म चलेको थियो। अझ अचम्म लाग्ने कुरा के रहेको छ भने यस युद्धमा एक व्यक्तिको पनि हताहत भएको थिएन।विश्वमा एक व्यक्तिको औसत जीवनकालमा ६ महिना ट्राफिक लाइटको पर्खाइमा बित्ने तथ्यहरुले देखाएका छन्।
सन् १९७९मा सहारा मरुभूमिमा घटेको घटनाले विश्वक धेरै वैज्ञानिकहरुको टाउको दुखाएको थियो। उक्त समयमा त्यहाँ हिउँ परेको बताउने गरिन्छ। विश्वमा सबै भन्दा छिटो कुद्ने चरा अस्ट्रिचको मस्तिष्क भन्दा आँखानै ठुलो हुने गर्छ। अझ एक निलो व्हेलको मुटुको बारेमा रहेको तथ्यले भने धेरैलाई चकित बनाउन सक्छ। एक वयस्क व्हेलको मुटु लगभग एक सामान्य कार जत्रो हुने गर्छ। विश्वमा धेरै चर्चित रहेको कोका-कोला आधिकारिक रुपमा उत्तर कोरिया र क्यूबामा बेच्न माथि रोक रहेको छ।
‘शरीरको तल्लो भाग अलिक मोटो छ’
July 19, 2019 Anu Arpan 0
अभिनेत्री केकी अधिकारी आज भोली फिटनेशमा ध्यान दिन थालेकी छन् । उनी जुम्बा र योगमा बढी ध्यान दिन थालेकी छन् । शरीरको तल्लो भाग अलिक […Read More]
आशिष र स्मिताको ‘जालमै पार्छु’ (भिडियोसहित)
अहिलेका चर्चित संगीतकार आशिष अविरल र नवगायिका स्मिता दाहालको रोमान्टिक गीत ‘जालमै पार्छु’ सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियोमा आँचल शर्मा र विजु पार्कीले अभिनय […Read More]
विश्व सिनेमाको इतिहासमा पहिलो पटक आर्कटिक सर्किलमा शुटिङ भएको यो फिल्म (भिडियो)
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफको फिल्म ‘वार’ को टीजरलाई निकै रुचाइएको छ। तर यो फिल्मसँग अर्को एउटा विषय पनि जोडिएको छ। वार विश्व […Read More]
‘हट नायिका’ को उपाधि पाएकी वाणीले बिकिनी लगाउन नमान्दा करोडौंको घाटा
बलिउड अभिनेत्री वाणी कपुरको अभिनय फिल्म ‘वार’ मा हेर्न पाइने भएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै यो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको थियो। ट्रेलसमा वाणीलाई बिकिनीमा […Read More]
केही समय अगाडि अभिनेत्री राधिका आप्टेको नयाँ फिल्मको इन्टिमेट सीन समाजिक संजालमा लिक भयो। यो सीनको तस्वीर समाजिक संजालमा रातारात भाइरल बन्यो। आफ्नो तस्वीर सामाजिक […Read More]
बाहुबली फेम प्रभास र श्रद्धा कपुरको नयाँ फिल्म साहोको रिलिज मिति सारिएको छ । यस अघि अगष्ट १५ मा रिलिज गर्ने भनिएको यो फिल्म सुपरस्टार […Read More]
फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत आज शुक्रबारबाट हरर चलचित्र ‘घर’ प्रदर्शनमा आएको छ । चलचित्रलाई अर्पण थापाले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् । उनले यसअघि पनि हरर […Read More]
आफ्नै फिल्म हेर्न नसकेकी सुरक्षा
शुक्रबार बिहान राजधानीको विग मुभिजमा चलचित्र ‘घर’को विशेष शो राखिएको थियो । जहाँ चलचित्र युनिटले पत्रकारसंग बसेर चलचित्र हेर्यो । जसमध्ये एक थिइन्, अभिनेत्री सुरक्षा […Read More]
कमेडियन कपिल शर्माको घरमा भीषण आगलागी ! (भिडियोसहित)
कमेडियन कपिल शर्माको मुम्बइस्थित अपार्टमेन्टमा भीषण आगो लागेको छ । यो बिल्डिङमा कपिलको अपार्टमेन्ट चौथो तलामा छ । आगलागीको समय घरमा कोही नभएकोले मानवीय क्षति […Read More]
आँचलसँग प्रचण्डकी नातिनीको लोभ्याउने रुप,,,
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी स्मिता दाहालको ‘जाल्मै पार्छु’बोलको नयाँ गीत बजारमा आएको छ । शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै गीत रिलिज गरिएको हो […Read More]
करिस्मा ढकाल र प्रनिलको अभिनय रहेको तिज गित “मुना मदन” हेर्नुहोस भिडियो सहित
प्रचण्डले भने, म सबै भाषा बुझ्छु, म हिन्दी पनि बोल्न सक्छु भन्दै हिन्दीमा भासण गरे, हेर्नुहोस केके भने